२४ जिल्लामा फैलियो सलह, कता छन् ठूलो झुण्ड ? - Birgunj Sanjal२४ जिल्लामा फैलियो सलह, कता छन् ठूलो झुण्ड ? - Birgunj Sanjal२४ जिल्लामा फैलियो सलह, कता छन् ठूलो झुण्ड ? - Birgunj Sanjal
१६ असार २०७७, मंगलवार १६:१५
काठमाडौं । नेपालका विभिन्न २४ जिल्लामा सलह भेटिएको छ । मंगलबार बिहान १२ बजेसम्म २४ जिल्लामा सलह रहेको प्लान्ट क्वरिन्टिन तथा विषदी व्यवस्थापन केन्द्र अन्र्तगतको सलस सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।